आज बढ्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…… – SUDUR MEDIA
आज बढ्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……
June 9, 2021 AdminLeaveaComment on आज बढ्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……
आज बुधबारको दिन सुनको भाउ सामान्य बढेको छ भने चाँदीको भाउ घटेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदीको तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ९०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
अघिल्लो दिन हिंजो मंगलबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ३०० र तेजाबी सुन प्रतितोला ९३ हजार ८०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । यस्तै चाँदी पनि तोलामा ५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ३५० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ३५५ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः साउनदेखि बढ्ने कर्मचारीको तलब र बृद्ध भत्ताले पनि थेग्न नसक्ने गरी उकालो लाग्यो बजार भाउ ! बजेटमा कर्मचारीको तलब र बृद्ध भत्ता बढाउने व्यवस्था भएसँगै बजार भाउ आकासिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि तलब र बृद्ध भत्ता बढाउने व्यवस्था गरेसँगै बजार भाउ पनि उकालो लाग्न थालेको हो । अहिले सबैभन्दा बढी मूल्य खाने तेलमा बढेको छ । त्यसपछि मासुको भाउ बढेको छ ।
खाने तेल साढे दुई महिनायता लिटरमै ७५ रुपैयाँसम्म बढेको छ। साढे दुई महिनाअघि १४५ देखि १६० रुपैयाँ पर्ने एक लिटर सोयाबिन तेलको मूल्य बढेर २२० रुपैयाँदेखि २३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ पर्ने सनफ्लावर तेल अहिले ३०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । तोरीको तेल पनि २७५ रुपैयाँदेखि २९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएकोमा ३३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यसैगरी, मासुको मूल्य पनि बढेको छ। केही महिना अघि ३१० रुपैयाँमा पाइने कुखुराको मासु अहिले ४५० भन्दा बढी पुगेको छ । यसैगरी, गेडागुडी र तरकारीको मूल्य पनि बढेको छ ।